Weerarkii Capitol: Ma sii xoogeysanayaan kooxaha maleeshiyaadka Mareyanka? - BBC News Somali
Weerarkii Capitol: Ma sii xoogeysanayaan kooxaha maleeshiyaadka Mareyanka?
Isu soo bixii "Million MAGA March" ee November 2020, oo ay ku jireen kooxo maleeshiyaad ah
Kooxaha midig-fog sida kuwii ka qeyb qaatay weerarkii Capitol ayaa khatar sii kordheysa ka ah gudaha Mareykanka, sida ay khubarradu sheegeen.
Tan iyo guushii Joe Biden ee doorashadii madaxtinnimada ee dhacday bishii November, waxaa kordhay kooxaha hubeysan ee ku lugta leh dibadbaxyada, sida ay tilmaamayaan koox dabagal ku sameysa rabshadaha ku saleysan siyaasadda.
FBI-da ayaa ka digtay in dibadbaxyo huebysan ay ka dhacaan dhammaan gobollada 50-ka ka kooban ee Mareykanka iyadoo la gaaray caleema saarka Biden oo ku beegan maanta oo ah 20-ka January.
Kooxdan oo lagu magacaabo ACLED ayaa sheegtay in kooxaha midig-fog ay aad uga qeyb qaateen dibadbaxyadii hubeysnaa ee looga soo horjeeday natiijada dooarshada.
"Dibadbaxyada ayaa waxay u dhow dahay inay rabshado isku beddelaan haddiiba ay joogaan xubno maleeshiayad ah," ayay tiri ACLED.
Kooxahanna keliya ma bilaabin inay ka qeyb qaateen dibadbaxyo badan - waxay sidoo kale ka qeyb galaan tababarrada iyo shaqaaleysiinta.
Meeqo koox ayaa jirta?
Waxaa jira dhowr maleeshiyaad gudaha Mareykanka, kuwaas oo aaminsan fikrado kala duwan, balse guud ahaan waxay ka soo horjeedaan dowladda. Inkastoo aysan mar walba muhiim ahayn inay u ololeeyaan rabshado, haddana aalaaba waa kuwo hubeysan qaarkoodna waxay ka qeyb qaateen dibadbaxyo rabshado wata.
Qaar badan ayaa sheega inay is difaacayaan.
Gobollada qaar waxay maleeshiyaadku ka doonayaan inay dowladda gobolka iska diwaan geliyaan, balse isbeddelkii labaad ee lagu sameeyay dastuurka ayaa xaddidaya heerka xakameynta dhaqdhaqaaqyadooda.
Tirada kooxaha maleeshiyaadka ee Mareykanka ayaa hoos u dhacay intii u dhaxeysay 2017 iyo 2019, iyadoo Amy Cooter oo baaritaan ku sameysa maleeshiyaadka ay sheegtay in kooxahan inta badan la arko marka ay xilka hayaan madax ka soo jeedda xisbiga Jamhuuriga.
Inkastoo ay jirto inay dowladda ka soo horjeedaan, kooxahan ayaa aad u taageerayay Madaxweyne Trump.
"Inta badan kooxahan ayaa Mr Trump u arka inuu yahay qofka ugu dhow ee abid noqday madaxweynaha ay jeclaan lahaayeen," ayay tiri Ms Cooter.
Howlaha maleeshiyaadka ayaa ku badan gudaha Mareykanka.
Khubarrada ayaana aaminsan in khatarta rabshadaha ay sii siyaadi doonto, xitaa kaddib caleema saarka Mr Biden.
Waa kuwama qaar ka mid ah kooxaha?
Labo ka mid ah maleeshiyaadka ugu caansan Mareykanka waa Oath Keepers (Ballan Dhowrayaasha) iyo Three Percenters (Boqolkiiba Saddex).
Labada kooxba waxaa la dhisay markii Barack Obama loo doortay madaxweyne, iyadoo xilligaas uu jiray shaki ah in dowladda federaalka ay "ka shaqeyneyso burburinta xorriyadda Ameerikaanka", sida uu qabo ururka ka hortagga xagjirnimada ee SPLC.
Kooxda Oath Keepers ayaa magaca ka qaatay xubnahooda oo wacad ku maray inay difaaci doonaan dastuurka Mareykanka. Waxaa lagu qiyaasay inay xubno ka yihiin 1,000 ilaa 3,000 oo ruux, balse saameyntoodu intaas way ka ballaaran tahay.
Kooxda Three Percenters ayaa magacooda kala dhex baxay sheegasho aan sax ahayn oo muujineysa in keliya 3% dadka Ameerikaanka ah ay Dagaalkii Xornimo-doonka kula dagaalalmeen Britain.
Dhowaan, Proud Boys iyo Boogaloo Bois ayaa soo caan baxay, kuwaasoo ku lug lahaa rabshado waddooyinka ka dhacay.
Kooxda Boogaloo Bois waa koox aan habeysneyn oo xubnahooda ay aalaaba muujiyaan inay jeclaan lahaayeen in xoog lagu rido dowladda, halka Proud Boys, oo la aasaasay 2016, ay yihiin kuwo ka soo horjeeda soo galootiga dhammaantoodna ay rag yihiin.
Shan sawir oo cajiib ah oo laga soo qaaday weerarkii Capitol Hill
Sarkaalkii booliska Capitol ee loo aqoonsaday 'geesi'
Xubnaha dhammaan kooxahan ayaa lagu arkay weerarkii dhismaha Capitol ee dhacay 6-dii bishan January.
Rag howlgab ka noqday milatariga oo ku jira maleeshiayadka
Joogitaankii rag milatariga ka tirsanaa ay joogeen Capitol ayaa abuuray walaac ah inay ku lug leeyihiin kooxaha maleeshiyaadka.
Baarayaasha ayaa u kuur galaya in kooxahan ay isticmlaan khiddadaha la baro milatariga iyo saraakiisha xoojinta sharciga, sida calaamadaha gacanta ee isu soo baxa iyo jiheynta kooxo dad ah.
Pentagon-ka ayaa kordhinaya dadaallada lagu ogaanayo xagjirnimada kooxaha midig-fog ee ka dhex jirta milatariga, saraakiisha federaalka ayaana baaraya ciidamada goobjoogga ka noqon doona xafladaha caleema saarka, sida uu qoray wargeyska New York Times.
Labo ciidanka Ilaalada Qaranka ka tirsan ayaa shaqada looga eryay sababo la xiriira ku lug lahaanshaha maleeshiyaadka midig-fog.
Wakaaladda AP ayaa sidoo kale tebisay in 22 hore uga tirsanaa milatariga ama hay'adaha xoojinta sharciga lagu arkay meel u dhow Capitol, iyadoo kuwo kalena baaritaan lagu hayo.
Oath Keepers oo ku sugan isu soo baxii "Jooji Xatooyada"
Stewart Rhodes, oo ah aasaasaha Oath Keepers, wuxuu ahaa sarkaal hore oo ciidamada ka tirsan, dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaana sheegaya in kooxaha ay ku guuleysteen shaqaaleysiinta khubarro hore oo milatariga ka tirsanaa.
Tirada booliiska iyo xubnaha milatariga ee hadda shaqada haya ee qirtay inay ka tirsan yihiin Oath Keepers way yar yihiin, sida uu qabo ururka ADL.
Qiimeyntii ugu dambeysay ee ay sameysay Waaxda Ammaanka Gudaha ee Mareykanka, ayaa waxay ka digeysaa in rashadda kooxaha caddaannimada u ololeeya ay tahay tan ugu daran ee ammaanka gudaha halis ku ah.